किन लाग्छ यौन सम्बन्धपछि पुरुषलाई निन्द्रा ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण « Pariwartan Khabar
किन लाग्छ यौन सम्बन्धपछि पुरुषलाई निन्द्रा ? यस्तो छ वैज्ञानिक कारण
2 February, 2018 9:15 am
लेनर र गोल्डबर्गका अनुसार चरमोत्कर्ष पछि अक्सिटोसिन, प्रालेक्टिन, गेमा अमिनो ब्यूटीरिक एन्डोर्फिन्स नामक बायोकेमिकलको सम्मिलित प्रभावका कारण थकान, हल्कापन, आनन्दको महसुस हुन्छ । यो मिठो निन्द्रामा सहायक हुन्छ । यौन सम्बन्धपछि पुरुष सुत्न चाहन्छन् भने महिला कुराकानी गर्न चाहन्छन् । यसको जैविक कारण छ ।
पुरुषलाई निन्द्रा लाग्ने अन्य कारण पनि बताइएको छ । मार्क लेनर र लिली गोल्डबर्ग डाक्टर अफ मेडिसिनद्वारा लिखित ‘ह्वाई डु म्यान फल अस्लिप आफ्टर सेक्स ?’ नामक पुस्तकमा केही अन्य कारण पनि लेखाएका छन् । लेनर र गोल्डबर्गका अनुसार यौन सम्बन्धका बेला र चरमोत्कर्षमा शरिरले मेहनत गर्ने गर्दछ जसका कारण मांशपेशीमा ऊर्जा निष्कासन गर्ने ग्लाइकोजनको कर्मी हुने गर्दछ । यसका कारण पुरुषलाई निन्द्रा लाग्छ ।